Abasivulele amacala abathi sabagila: Osaziwayo
NOKUBONGWA PHENYANE | September 5, 2019
BATHI baphoxekile osaziwayo bakuleli okuchaywe izithombe zabo ezinkundleni zokuxhumana, besolwa ngokudlwengula nokuhlukumeza abesifazane.
Labo saziwayo okukhona abaculi, abefundisi, isikhulu sikamasipala weTheku nesomnyango omkhulu esifundazweni, osomabhizinisi, abasakazi, banxuse abesifazane abathi babahlukumeza ukuthi babavulele amacala.
Banekwe ekhasini elingundabuzekwayo, iDBN Survivors kwiTwitter lapho abesifazane abazifihlile begeqa amagula bebasola ngokubahlukumeza.
Imizamo yokuxhumana nosungule leli khasi ngenhloso yokukhuluma naye nabanye besifazane abafake ezikhalo ayiphumelelanga, uthe akazimisele ukukhuluma nabezindaba.
Isolezwe likhulume nabanye abachaywe ekhasini abaveze ukuthi badumele ngokwenzekile futhi baswele namazwi.
UPastor Sthembiso Zondo, ongomunye wabachayiwe uthe: “Isikhathi siyofika kulaba abavele bangcolise nje amagama abantu. Angazi mina laba besifazane bacashelani uma kukhona lapho bahlukumezeka khona njengoba ngabe baya emaphoyiseni ukuze sikwazi ukujeziswa. Ngiyafisa ukumbona owesifazane owenze lokhu, ukuze ngixolise kuyena,” kusho uZondo.
FUNDA: Kunekwe abasolwa ngokudlwengula kuTwitter
Imbongi eyintatheli oKhozini FM, uBongani Mavuso, ithe ngendlela ephatheke kabi ngayo, ize yathinta unina imtshela ngalolu daba.
“Angazi noma kumele ngiphawule yini ngalolu daba. Mina ngiwumuntu osebenza eduzane nabesifazane ngakho uma igama lami selinekwa kanjena kubuhlungu kimi. Ngiwumuntu obahlonipha kakhulu abantu besifazane ngakho le nto ingiphathe kabi.”
Umsakazi weGagasi FM, uFelix Hlophe, uthe akafuni ngisho ukuphawula ngalolu daba. Umculi wekwaito uDanger, uthe:“Akudlalwa kanjena. Kukhona abantu besifazane abahlukunyezwe ngempela, abangakwazi ukusizakala kodwa sekukhona abaqhamuka benza kanje. Le nto engisolwa ngayo angiyazi futhi ngiyacela abayiqalile bayiyeke.”
Isikhulu kuMasipala weTheku, uThembinkosi Ngcobo, sithe singumuntu obanika uxhaso ngaso sonke isikhathi abesifazane abahlukunyeziwe.
“Akukaze kube khona owesifazane engamhlukumeza ngokocansi. Ngiyabahlonipha futhi ngiyohlale ngibahlonipha abantu besifazane kuleli. Sengixhumanile nabameli bami ngalolu daba futhi lesi isinyathelo sokuqala sokuthi ngiphendule ngalolu daba.
Ngokwami ngiyanxusa ukuthi obhale lezi zinsolo aye kovula icala ukuze ngiziphendulele ngendlela futhi ngijeze uma kufanele,” kuchaza uThembinkosi enkundleni yokuxhumana i-Instagram.
Okhulumela amaphoyisa kuzwelonke, uVish Naidoo, uthe sekukhona abesilisa abavule amacala eGoli emuva kokufakwa ezinkundleni ezibangcofayo.
“Baningi abesilisa abafonile, bekhala ngokudicilelwa phansi kwamagama abo. Abesifazane singabemukela ngezandla ezifudumele uma bengazovula amacala,” kuchaza uNaidoo.
Uthe nabo laba besilisa bangawavula amacala okudicilelwa phansi kwesithunzi sabo njengoba benekelwe izwe besolwa ngamacala abucayi.